Newsenepal:: समताको भाष्य
देउकली र हरिकला गह्रौं घाँसको भारी बोकि कुरा गर्दै हिडिरहेका थिए । दुबै जना त्यो ठाँउमा विवाह भै आएको दुई वर्ष जति भएको थियो । देउकलीले बाल्यकालदेखि आहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रको भोगाई आफ्नो मन मिल्ने साथी हरिकलालाई सुनाई रहेकी थिइन् । उनीले असजिलो बाटोमा रोकिदै र सजिलो बाटोमा लामो लामो श्वास लिदै भन्दै गइन - म र भाइ जुम्ल्याहा हौं । म सामुदायिक स्कुलमा र भाइ निजी स्कुलमा पढेका थियौ । भाइका बार अनुसार फेरि फेरि लगाउनु पर्ने चार जोर ड्रेष्स थिए । भाइका ड्रेष्स मैले धुनु पर्दथ्यो । कहिलेकाही धुन बिर्सेमा आमाले आफुभन्दा सानो भाइका ड्रेष्स धुन पर्दैनथ्यो भनि गाली गर्नुहुन्थ्यो । म भन्दा आधा घण्टा पछिमात्र भाइ आमाको गर्भबाट बाहिर आएको रे । यदि पहिले भाइ जन्मेको भए उ दाइ हुन्थ्यो । के आमाले आफुभन्दा सानी बहिनीका ड्रेष्स धोइदिनु पर्दैन भनि दाइलाई भन्नु हुन्थ्यो होला ?आदि ।
म पढाइमा सबै कक्षामा दोस्रा हुन्थे । एकजना शिक्षककी छोरी सधैं प्रथम हुन्थिन् । तर एसएलसीमा भने म नै प्रथम भए । कक्षा बाह्र शिक्षा विषय लिएर प्रथम श्रेणीमा पास भए । मैले पढेकै स्कुलमा करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न छनौटको लागि विज्ञापन खुल्यो । महिलालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । म खुसी भै निवेदन दिएर लिखत परीक्षाको तयारी गरे । लिखितमा मेरो नाम एक नम्बरमा निस्क्यो । महिला म मात्र थिए । साठी अंकको लिखित र चालीस अंकको अन्तर्वाता अंक छुट्टाइएको थियो । अन्तर्वाताको लागि बिशेष तयारी गरि म गए । मलाई घरयासी र नित्तान्त व्याक्तिगत प्रश्नहरु सोधियो - तिम्रो मामाको घर कति टाढा छ ? तिम्रो मामाका छोरा कति वर्ष जेठा छन् ? यदि तिम्रो विवाह भयो भने शिक्षण पेशालाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छ्यौ ? आदि । मेरो विवाह बारे बाबुआमाको आसय जस्ताको तस्तै भने । लिखित र अन्तर्वाताको अंक जोडदा म अयोग्य ठहरिए । करिब तीन मिनेट घाँसको भारी बिसाएर दुबैले जलुकाको पातमा पानी थापी पिएपछि देउकलिले भन्दै गइन - मेरो विवाह भएर याहाँ आएको दश महिना पछि अघिल्लो वर्षको जस्तै शिक्षक पदपूर्तिको लागि बिज्ञापन हाम्रो घर नजिकैको स्कुलमा खुल्यो । लिखत परीक्षामा याहाँ पनि एक नम्बरमा नाम निस्क्यो । माइतको स्कुलको हकमा विवाह भए पछि दुलाहको घरमा जान्छे भनेर होला छनौट नगरेको भन्ने लागिरहेको थियो । यहाँ छनौट हुने कुरामा धेरै ढुक्क थिए । अन्तर्वातामा केही कुरा ढाटनु पनि पर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा पाइसकेकी थिए । अन्तर्वातामा पहिलेका जस्तै भए पनि केही शैक्षिक प्रश्नहरु सोधियो-शिक्षकलाई सुत्केरी बिदा कति दिन दिइन्छ ? शिक्षकले सुत्केरी स्याहार बिदा कति दिन पाउँछन् ? मानौ तिमी शिक्षकमा छनौट भयौ र केही महिना पछि सुत्केरी भयौ भने विद्यार्थीको पढाइ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? आदि । यस प्रतिस्पर्धामा पनि म अयोग्य ठहरिए ।
मैले एक दुई वर्ष बच्चा नजन्माउने मात्र भनिन बरु सलले पेट समेत ढाकेकी थिए । तर माइजुले हेड म्याडमलाई दाइको छोरीको महिनावारी रोकिएको पाँच महिना भयो भनि पधेरामा अघिल्लो दिन मात्र भन्नु भएको रहेछ । पढदा समानता र समताका घुमाउरा प्रश्नहरुको पनि उत्तर लेखियो । हामीहरूलाई अहिले बच्चाबच्चीले रोक्छ । बच्चाबच्ची हुर्के उमेरले रोक्छ । कुरा गर्दागर्दै तिनीहरू आ-आफ्नो बाटो लाग्ने दोबाटोमा आए । हरिकलाले पनि आफ्नो गोलचक्रररुपी दुखेसो भोली सुनाउने भनिन् । अमीलो मन र निन्याउरो अनुहारको साथ दुबैले फेरि एकपटक एक अर्कोलाई हेराहेर गरि आ-आफ्नो बाटो लागे
266201/1/2020 @ 09:54